အိမျမှာ အသုံးပွုနတေဲ့ LCD /LED TV မြား အခြိနျမတိုငျခငျ ပကျြစီးခွငျးမှ ကာကှယျပွီး သကျတမျးပွညျ့ အသုံးပွုနိုငျရနျအတှကျနညျးလမျး ကောငျးမြား – Nyi Ma Lay
By Nyi Ma LayPosted on September 10, 2021
သုံးစှဲသူ အမြားစု ဖွဈလရှေိ့တဲ့ပွဿနာမြားနဲ့ ဖွရှေငျးခကျြ အခြို့ ကိုဖျောပွလို့ပါတယျ။😄😄😄
ခွောကျသှသှေ့ားရငျ ၁နာရီခနျ့စောငျ့ပွီးမှ ပွနျစမျးကွညျ့ပါ။ အဆငျပွသှေားပါလိမျ့မယျ 😄😄😄 ပွနျစမျးကွညျ့၍ အစငျးကွောငျးမြားပျေါလာလြှငျသျော လညျကောငျး ၊ အ‌ ရောငျအဆငျး ပုံမှနျ မဟုတျပါက ဆကျလကျ စမျးသပျခွငျးမပွုလုပျပဲ ပွငျဆိုငျသို့သာ ပို့ပါ။
မိတျဆှတေို့ သိလိုသညျ မြားကိုလို PH 095182441 (GOOD ELECTRONIC)သို့ ဆကျသှယျမေးမွနျးနိုငျပါတယျ။❤️❤️❤️
မိတ်ဆွေတို့ အိမ်မှာအသုံးပြုနေတဲ့ LCD /LED TV များ အချိန်မတိုင်ခင် ပျက်စီးခြင်းမှ ကာကွယ်ပြီး သက်တမ်းပြည့် အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက်နည်းလမ်း ကောင်းများပြောပြလိုပါတယ်။
သုံးစွဲသူ အများစု ဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ပြဿနာများနဲ့ ဖြေရှင်းချက် အချို့ ကိုဖော်ပြလို့ပါတယ်။😄😄😄
(၁ ) ရေဝင်ခြင်း ၊ ကြောင်သေးဝင်ခြင်း၊
(၂ ) ပြုတ်ကျခြင်း ၊ ဆောင့်မိ ခိုက်မိခြင်း ၊ ကလေးကြောင့် ထိခိုက်မိခြင်း၊
(၃ ) TV မှန်ပြင်အနီးခြင်ရိုက် ဘက်တံဖြင့် ရိုက်မိခြင်း၊
(၄ ) မီးအား ဆောင့်တက်ခြင်း ၊ မိုးကြိုးစက်ကွင်းမိခြင်း၊
(၅ ) TVကို stand by mode အနေအထားဖြင့် ပိတ်ခြင်း၊
(၆ ) Memory stick ၊ External Hard disk ဖြင့် အသုံးပြုခြင်း ၊ ……….
**** ( ဖြေရှင်း ချက်များ )****
(၁) ရေဝင်ခြင်း ၊ ကြောင်သေးဝင်ခြင်း
အချို့သော အသုံးပြုသူများသည် TV မှန်ပြင်ပေါ်ရှိ ဖုန်မှုန့် များကို မှန်ကြည်ဆေးရည် ဖြင့် ပက်ဖြန်း‌ဆေးကြော သန့်ရှင်း တတ်ပါတယ်။ အခုလို မှန်ကြည်‌ဆေးရည် ဖြင့် မှန်ပေါ်ကို မဖြန်းသင့်ပါ။
အကယ်၍ ဖြန်းမိခဲ့ပါက မှန်ကြည်ဆေးရည်များ အောက်ဘက်သို့ စီးကျလာကာ ၊ TV ‌အတွင်း မှန်ပြင်အောက်ဖက်တွင်ချိတ်ဆက်၍ ဆက်သွယ် ထားသော micro flim ပြားများ နှငိ့ အရည်များ ထိတွေ့ပြီး short circuit ဖြစ်ကာ မှန်ပျက်စီးစေပါတယ်။
ဘုရား ပန်းအိုး ‌‌‌ရေမှောက်ကျလို့ သော်လည်းကောင်း၊ အကြောင်းတခုခု ကြောင့် မတော်တဆ ရေ ဝင်ခဲ့လျှင် ဘာလုပ်ရမလဲ။ TV ကို ပါဝါ ဖွင့်၍ ပြန်စမ်းကြည့်ခြင်းလုံးဝ မလုပ်ပါနဲ့ ပိုမို လျှင်မြန်စွာ မှန်ပြင်ပျက်စီးစေသော ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
မှန်ပြင်ပေါ်တင်ကျန်နေသော ရေများနဲ့ အတွင်းသို့ဝင် သွားသောရေများကို အမြန်ဆုံး အဝတ်ဖြင့်‌ ခြောက်သွေ့ အောင် သုတ်ပေးပါ။ Tv မှန်ပြင်ကို အပေါ်မှာ ထားပြီး TV ကို အပြားလိုက် အနေထားဖြင့် စားပွဲပေါ်တွင်တင်ပါ။
ရေဝင်သွားသော မှန် နှင့် အောက်ဘက်ဘောင်ကြားကို Hair Dryer ကိုဘယ်ညာ ရမ်း၍ နွေးလာအောင် ၁၀မိနစ် ခန့် နားနားပြီးမှုတ်ပေးပါ။ မှန်နှင့် ရေဝင်သွားသော ဘောင်ကြားကို လက်သည်းနှင့် အနည်းငယ်ဟ ပြီးအပူ‌ ပေးရင် ပိုကောင်းပါတယ်။ အပူ မလွန်ကဲပါစေရန် သတိပြုပါ။
ခြောက်သွေ့သွားရင် ၁နာရီခန့်စောင့်ပြီးမှ ပြန်စမ်းကြည့်ပါ။ အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ် 😄😄😄 ပြန်စမ်းကြည့်၍ အစင်းကြောင်းများပေါ်လာလျှင်သော် လည်ကောင်း ၊ အ‌ ရောင်အဆင်း ပုံမှန် မဟုတ်ပါက ဆက်လက် စမ်းသပ်ခြင်းမပြုလုပ်ပဲ ပြင်ဆိုင်သို့သာ ပို့ပါ။
ရေပမာဏ များစွာ ဝင်ခဲ့ရင် ၊ ကြောင်သေး ဝင်ခဲ့ရင် စက်ကို ပါဝါထိုး စမ်းသပ်ခြင်းမလုပ်ပဲ TV ပြင်ဆိုင်သို့သာပို့ပါ။ စက်ကို အဖုံးဖွင့် ပြီးservicingပြုလုပ်ရန်လိုသောကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ နံရံတွင် ချိတ်ဆွဲခြင်း ဖြင့်လည်းကြောင်သေး ပန်းခြင်း မှကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။
TV မှန်ပြင် ကို သန့်ရှင်းလိုပါက အဝတ်ခြောက်ဖြင့်သာ ပွတ်တိုက်ပါ။ ပွတ်တိုက်၍ မပြောင်ပါက အဝတ်ကို ရေ အနည်းငယ်စွတ် ရေပြန်ညစ် အစိုဓာတ်ပါရုံလေး သာ ထားပြီး အသုံးပြုပါ။ ရေမစီးကျပါစေနဲ့။
( ၂) ပြုတ်ကျခြင်း ၊ဆောင့်မိခြင်း ၊ ကလေးကြောင့်ထိခိုက်မိခြင်း၊
TV ကို အဝင် အထွက်တံခါးပေါက် ၊ ပြတင်းပေါက်များ အနီးမှာ မထားပါနှင့်။ တိုက်မိလို့သော်လည်ကောင်း၊ ပြတင်းပေါက်မှ လေတိုက်၍သော်လည်းကောင်း ပြုတ်ကျပျက်စီးနိုင်ပါတယ်။
ပြတင်းပေါက်မှ မိုးပက်လို့လဲ ပျက်စီးတတ်ပါတယ်။
တိုက်မိခြင်း ၊ လေတိုက် ပြုတ်ကျခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်အတွက် tv အောက်ခြေ ( stand ) ကို မကြွ စေရန်(Double Tape ) နှစ်ဖက်ကပ်တိပ်ဖြင့် ကပ်ထားပေးပါ။ ကလေးကြောင့် ပျက်စီးခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် အတွက် ကလေး မမှီနိုင်သောနေရာတွင်ထားပါ။ နံရံကပ် ( Wall mount) ဖြင့်လဲ ချိတ်ဆွဲထားနိုင်ပါတယ်။
(၃ ) TV မှန်ပြင်အနီး ခြင်ရိုက်ဘက်တံဖြင့်ရိုက်မိခြင်း၊
TV မှန်ပြင် ၃ပေ ပတ်လည်တွင် ခြင်ရိုက်ဘက်တံ အသုံးမပြုသင့်ပါ။အချို့သော TV သုံးစွဲ သူများသည် TV မှန်ပေါ်တွင်ခြင် လာနားနေသည် ကိုတွေ့မိပါက ခြင်ရိုက်ဘက်တံဖြင့်
မှန်ပြင်နား ကပ်ရိုက်တတ်သည် ကိုတွေ့ရတတ်ပါတယ်။
ထိုသို့ပြုလုပ်ပါက ခြင်ရိုက် ဘက်တံမှ ထွက်ပေါ်လာသော( High voltage) ကြောင့် LCD panel အတွင်းရှိမိုက်ခရို ကာဗွန် လမ်းကြောင်းလေးများ ပြတ်တောက်ပျက်စီးစေတတ်ပါတယ်။
အရောင်မ မှန်ခြင်း ၊အစင်းများပေါ်လာခြင်း၊ရုပ်တုန်ခြင်းများဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ထို့သို့ ဖြစ်လာပါက LCD panel မှန်ပြားလိုက် အသစ်လဲရုံသာ ရှိပါတော့တယ်။
(၄ ) မီးအားဆောင့်တက်ခြင်း၊ မိုးကြိုးစက်ကွင်းဝင်ခြင်း
ရာသီဥတု ကြောင့်သော်လည်ကောင်း၊ အခြေနေတခုခုကြောင့်သော်လည်းကောင်း မီးအားအတက်အကျဖြစ်တတ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကို ဝင် ရောက်လာတဲ့ Brand new tv အများစုဟာ AC 110V ~ 240V ဆိုပြီးပါကြပါတယ်။
ဆိုလိုတာ က မီးအား အနည်းဆုံး ၁၁၀ ဗို့ ကနေအများဆုံး ၂၄၀ ဗို့ အတွင်း ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ် နိုင်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် မီးအားကျလဲ သုံးလို့ရနေတာပဲ ဘာလို့ (Safe Guard) ဆေ့ဂတ် ခံ သုံးနေသေးလဲမေးစရာရှိပါတယ်။
TV က ၁၁၀ဗို့ကနေ၂၄၀ဗို့အတွင်း အလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တသမတ်တည်း တည်ငြိမ်သော ဗို့အားကို လိုအပ်ပါတယ်။ ၁၁၀ ဗို့ ဆိုလဲ တသမတ်တည်း ဖြစ်နေတာ၊ ၂၂၀ ဗို့ တသမတ်တည်းဖြစ်နေတာကို အလွန်ကြိုက်ပါတယ်။
မိနစ် အနည်းငယ်ကြာမှ volt အား ဖြည်းဖြည်းခြင်း အတတ်အကျဖြစ်တာကို ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင် ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ (Surge Voltage) လို့ခေါ်တဲ့ စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း ဗို့အားအလျှင်အမြန် အတတ် အကျဖြစ်တာကိုတော့ TV များက ခံနိုင်ရည်မရှိပါဘူး။
ဒီအတွက်ကိုကာကွယ် ဖို့အတွက် (Safe Guard) များကိုသုံးစွဲရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရုတ်တရက် မီးအားအတက်အကျဖြစ်ခြင်းကိုလဲကာကွယ်ပေးပါတယ်။အရည်အသွေးကောင်းတဲ့ (Safe Guard) များကိုသာအသုံးပြုသင့်ပါတယ်။မိုးတွင်းမှာ မိုးကြိုးစက်ကွင်းဝင်တတ်ပါတယ်။
မိမိ TV အင်တနာ တိုင်အနီး ကိုသော်လည်းကောင်း၊ဓာတ်တိုင်ကိုသော လည်ကောင်း မိုးကြိုးပစ်ရင်TV ပျက်စီးစေတတ်ပါတယ်။မိုးတွေ ရွာပြီး မိုးကြိုးတွေအလွန် ပစ်နေခဲ့ရင် TV မှာတပ်ထားတဲ့ အင်တာနာကြိုး နဲ AC မီးပလပ်ခေါင်းဖြုတ်ထားခြင်းဖြင့်လည်းကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။
(၅) Tv ကို stand by mode အနေအထားဖြင့်ပိတ်ခြင်း
ဖွံဖြိုးပြီး နိုင်ငံ အတော်များများမှာ တော့ TV ကို(Stand By Mode) ရီမုခ် နဲပိတ်တဲ့ အနေအထားသာထားကြပါတယ်။ မီးခလုတ် မပိတ်ကြပါဘူး။လျှပ်စစ်ဓာတ်အားတည်ငြိမ် ပြီးအနှောက်အယှက်ကင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတော့ TV ပိတ်ရင် မီးခလုတ်က ပါပိတ်ထားမှ စိတ်ချရပါတယ်။TV ပါဝါပိတ်တဲ့ ပုံစံ အကြောင်းကိုလဲ နဲနဲပြောပြလိုပါတယ်။Smart TV / Android TV မဟုတ်သော Lcd Led ရိုးရိုးtvများကို ရီမုခ် နှင့်အရင် မပိတ်ပဲ မီးခလုတ်မှတန်းပိတ်နိုင်ပါတယ်။
Smart TV နှင့် Android TV များကို Remote control နဲ အရင်ပိတ်ပါ။ TVအလုပ်လုပ်တာ ပြီးဆုံးမှ မီးခလုတ်ကပိတ်သင့်ပါတယ်။ Computer programming system ပါလာတာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
မီးခလုတ်က ပဲ တန်းပိတ်တာ များလာရင်တော့ Operation foundation များပျက်ပြီး Firmware ပြန်တင်ရခြင်း ၊ emmc IC ပျက်ခြင်း Main circuit board အချပ်လိုက်လဲရခြင်းမျိုးအထိ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
Remote နှင့်အရင်ပိတ်ပြီးမှ မီးခလုတ် မှပိတ်ခြင်းသည် သာလျှင် အစီအစဉ်ကျသော အလုပ်တခုဖြစ်ပါတယ်။
(၆) Memory stick /External Hard Diskဖြင့်သုံးခြင်း
ယခု နောက်ပိုင်း ဝင်ရောက်လာသော TV များကို Memory stick /External Hard disk ဖြင့်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။အသုံးပြု မည်ဆိုပါက memory stick /external hark disk အတွင်းမှာ tvနှင့် မသက်ဆိုင်သော computer Soft ware များ firmware များ Virus များ မရှိအောင်ဂရုစိုက်ရပါမယ်။
TV မှ ဖွင့် ဖတ်နိုင်သော Movie /Music/photo များကိုFormat နှင့် Resolution ကိုက်ညီအောင်ထဲသွင်းအသုံးပြုရပါမယ်။မကိုက်ညီသော file များနှင့် virus ပါသော file များထည့်သွင်း အသုံးပြုမိပါက စက် Hum ခြင်းOperation စနစ်များပျက်ကာ Cpu IC လောင်ကျွမ်းMain circuit board ပျက်ခြင်းအထိ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
မိတ်ဆွေတို့ သိလိုသည် များကိုလို PH 095182441 (GOOD ELECTRONIC)သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။❤️❤️❤️
Previous post ဓာတ်ဆီနဲ့ဒီဇယ် လောင်စာဆီမှားပြီး သင့်ကားမှာထည်.မိရင်ဘာဖြစ်နိုင်သလဲ ?
Next post အဖိုးတနျလှတဲ့ မွနျမာ့ဆေးမွီးတို မှတျစု လေး…. လိုအပျတဲ့အခြိနျ သုံးလို့ရအောငျ ရှယျပွီး သိမျးထားစခေငျြပါတယျ…